30 Ngwurugwu egwurugwu egwu maka umuaka - Ezinụlọ
30 Ngwurugwu egwurugwu egwu maka umuaka
30 Fun Rainbow Crafts
Mgbe a bịara n’idebe ụmụaka obi ụtọ n’ime ụlọ, ọ bụghị egwurugwu na unicorns niile-mana nke ahụ apụtaghị na ị ga-ebi ndụ na ịnwụ site na mbara igwe. Gbalịa otu n’ime ọrụ egwurugwu egwurugwu a maka ụmụaka n’oge ọzọ ụbọchị mmiri ozuzo na-agagharị na ị ga-aga nke ọma, agbanyeghị ihu igwe.
Njikọ: 30 Mason ite Crafts Maka Yourlọ Gị
1. Akwụkwọ warara egwurugwu
Ọ bụrụ na ị bụ nne na nna nke nwatakịrị, ọ ga-adị mma ikwu ya mpempe akwụkwọ bụ nri ezinụlọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ụfụ, n'ụzọ nkịtị, ịgbagọ ma bulie akwa egwurugwu egwurugwu mgbe obere onye na-eme ọgbaghara ọgbụgba 'gbasaa n'ala n'ihi na ọ dị ka enweghị ihe kpatara ya (naanị anyị?) Enwere ọla ọcha. Kpoo nwa ewu gị ma jiri ihe ndị a rụọ ọrụ nke ọma na ọrụ akwụkwọ a dị mfe maka ngwaahịa gwụchara nke ga-eweta obi ụtọ dị ukwuu-dị nnọọ hụ na mpempe akwụkwọ na-ewere ọnọdụ n'elu tebụl, yabụ azụ gị ga-enwe ezumike.
2. Ogwurugwu Osi
Egwuregwu egwu nwere ike inye ọtụtụ ụmụaka obi uto na osikapa bụ nri ụlọ nke dabara na ụgwọ ahụ. Egwurugwu egwurugwu na-enye ọka nkịtị nkwalite na ọrụ a na-akpali akpali, na-agbakwunye ọhụụ na-akpali akpali na ahụmịhe na-akpali akpali.
3. Pipe Cleaner Egwurugwu Igwe Ọdụdọ
Na-agba ọsọ site na ndọta iji jide ihe niile nwatakịrị gị kacha mma? Ozi oma: Enwere nka maka nke ahu. Ihe oru a na - abia na obere ihe ndi enyi na enyi. yi ọkpọkọ hichaa , chere , mkpa - ọ dịkwa mfe ụlọ akwụkwọ ọta akara ịbanye na (ọ bụrụhaala na ị na-egbochi egbe ọkụ ọkụ ahụ erughị eru, nke ahụ bụ). Igwe ndọta a gwụchara bụ mmetụ na-amasị anya nke ga-agba ndị na-ese ihe na-eto eto ume ka ha na-asọpụrụ nka ha.
ojiji nke soda na ihu
4. Zụlite egwurugwu egwurugwu
Ihe omimi sayensị a mara mma ga-akpali ọtụtụ ooh s na aah s Nke kachasị, ọ dịghị mkpa ịhazi oge na ịhazi oge njem na ụlọ ahịa nka-ihe niile ị chọrọ bụ swath nke mpempe akwụkwọ na ụfọdụ akara a na-asacha na-eme ka egwurugwu egwurugwu na-eme.
5. Egwurugwu Waffle achicha
Ka anyị kwuo eziokwu, ọrụ aka ọ bụla ị ga-eri ga-aba uru. Nke ahụ bụ eleghị anya ihe mere anyị ji hụ nri ụtụtụ ụtụtụ nke egwurugwu waffle achicha. Mee ka nwa gị bụrụ onye isi nri na kichin a-ọ ga-enwe ọ toụ ohere ị waụ waffles na ịsa ahụ egwurugwu na ị ga-enwe obi ụtọ iri mkpụrụ nke ihe okike gị.
Nwee obi uto na ulo na umuaka
6. Egwuregwu egwurugwu umuaka nke egwuru egwu
All agba nke egwurugwu, bee na ibe si ụfụfụ Ibé akwụkwọ, ikpokọta na N'ụbọchị nke abụọ, n'ígwé ojii nke shaving ude na nke a fun sensory craft na-ekwe nkwa kacha toddler ntụrụndụ. Ndụmọdụ ndụmọdụ: Were ọrụ ahụ na tub ahụ ma ị ga - anọ n'ọnọdụ nke ọma iji duhie obere nwatakịrị na - ajụkarị ka ọ gachara oge ịsa ahụ.
7. Mfe Rainbow Popsicles
Mmiri ozuzo akwụsịla, anyanwụ apụọ ... ma olee ụzọ kachasị mma iji mee ememe karịa site na ịme egwurugwu na-eri nri na gị na-eto kiddo-crazed? Omume a nwere ọgụgụ isi na-akpọ naanị ole na ole dị mfe ịchọta ihe na nsonaazụ ya bụ Insta-kwesịrị arụrụ n'ụlọ na nne na nna na nwa ga-anụ ọkụ n'obi. Banyere oge dị mma eji nọrọ na kichin, nke ọma, nke ahụ dị ezigbo ụtọ, kwa.
Nwee obi uto n'ime ulo na umuaka
8. Egwurugwu Soap ụfụfụfụfụfụfụfụfụfụ
Ọ dị gị ka ị na-achụ egwurugwu mgbe ọ na-abịa n'ichepụta egwuregwu maka brood gị? Choo mmiri mmiri mmiri dị na ụlọ ahịa nka ma gwakọta ‘em na efere e ji asa efere iji mee mousse a dị mma. Mgbe ahụ, banye n’obere ezumike, n’ihi na ala mmiri a nke na-egosipụta ya bụ nnoo bụ ebe a na-egwu egwuregwu pastel na-acha odo odo-ọ ga-emekwa ka ụmụaka gị nwee afọ ojuju maka obere oge.
9. Egwurugwu Mkpụrụ Pizza
Nchịkọta kuki a nke nwere shuga nwere ike ịkụziri ụmụaka ume ka ha mata ọdịiche dị na ịmata agba niile nke egwurugwu ... na mgbe nkwụsị meltdown malitere, obi ga-eru onye ọ bụla ala ịchọta ngwaahịa gwụchara nke zuru oke iri (yana ọ bụghịkwa shuga niile kuki).
10. Egwurugwu slime
Ah, slime. Anyị hụrụ ka ị si enwe obi anụrị ị na - eme ụmụ anyị mana anyị kpọrọ asị na - anwa iwepu gị n’ihe ndina akwa anyị. N'agbanyeghị nke a, DIY slime a mara mma nke ukwuu, o siri ike iguzogide. Naanị jiri amamihe họrọ ịhọrọ ebe ị na-eme atụmatụ ka ụmụ gị nwee ike nwee ọ joyụ niile nke gooey mgbe ị na-ahapụ onwe gị ọrụ nhicha dị oke mkpa.
Njikọ: Etu ị ga - esi nweta uwe (n'ihi na ụmụaka gị nwetara obere mkpụrụ na ọrụ ngo ha)
11. Egwurugwu Button Wind Chime
Ngwakọta dị iche iche nke bọtịnụ rụrụ arụ nwere ike ịbụ ikpere anụ ọhịa nwa gị. Ọbụna karịa fun? Na-agbakwunye onyinye ndị a mara mma na ọrụ ikuku a dị mfe, nke na-enye ọtụtụ ihe ụmụaka na-eme enyi na ntụrụndụ yana ịbata ụlọ mma mara mma.
ndepụta nke 2013 Hollywood romance film fim
12. Egwurugwu Jellyfish Nku
Na-agba mmiri okike a na-apụghị ịgbagha agbagha ma nye ụlọ gị ụfọdụ oge ezumike ọkọchị na ọrụ nka. Gị na nwa gị nwere ike ịrụ ọrụ nke a na enweghị ihe ọ bụla karịa ihe ndị na-emepụta ihe ... ma ị kwesịrị, n'ihi na anya googly mee ka ihe niile ka mma.
13. Ime achịcha egwurugwu
Mụaka ga-a overụrị ọ toụ iyi akwa okpu na ọrụ a esi nri. Na mgbakwunye, mgbe nka na-apụta n’ọkụ ahụ, onye ọ bụla ga na-atụ egwu egwu egwurugwu ahụ kpọrọ nkụ.
14. Ribbon Rainbow Mgbidi Agbanye
A mpempe nghọta nghọta nke ọbụna ụmụntakịrị nwere ike inye aka na-na n'ụzọ dị ịrịba ama, ọ ka na-emesị na-ele anya na mgbidi.
15. Egwurugwu Pony Bead Mgbaaka
Gbaa obere gi ume ime ka akwara ikike moto ya di nma onye na-ehicha ọkpọkọ beads craft nke na-ama mma na nbuli ọ bụla.
Osisi Echiche efu
16. Rainbow mbo agba
A isi ntutu mbo na ụfọdụ ụmụaka na-enyi na enyi-ese bụ ihe niile ị chọrọ iji mee ka nwa gị na a usoro art oru ngo na-agba ume ma na agba experimentation na creativity. Mara: Gbalịa mee ihe a mgbe ị gachara ịsa ahụ mgbe ị na - agbacha ntutu nwa gị na ihe nwere ike iju anya na ọ ga - aga nke ọma.
17. Mee N'onwe Gị egwurugwu welara
Kpoo uche nwa gi site na mbanye anataghị ikike nke ulo akwukwo a nke - site n’enyemaka nke ihe na-eme ka o sie ike ma obu abuo - na-eme ka ihe eji acha odo odo na-eme ka igwe na-eme egwurugwu.
18. Afọ Kechie E Bipụtara Egwurugwu nka
Kwụsị na nka tupu ị hapụ obere nwa gị ka ọ zọtu. Ọụ nke ịfụfụ afụ abụghị ihe nzuzo-mana ọ ga - eme na ngwungwu ngwungwu a na - enyekwa ezigbo aka n'ịrụ ọrụ nka. Mee ka onye ị na-ete egwurugwu na ngwugwu afụ ahụ maka ọrụ akara nke ga-atọ gị ụtọ.
19. Akwụkwọ efere Rainbow Yarn Art
Kidsmụaka buru ibu nwere ike igosipụta ihe okike ha ma mụta ihe ndị bụ isi nke nkedo site na nkasi obi nke ụlọ nke aka ha site na iji nkuzi ụlọ-ec.
ụdị ntutu ntutu ụmụ nwanyị
20. Egwurugwu ukwu akara ukwu Butterfly Keepsake
Anyị maara na ọ bụ ọka, mana ọ na - abụkwa eziokwu: Nwa gị agaghị abụ oke a ruo mgbe ebighị ebi. Ofmụaka nke ọgbọ ọ bụla nwere ike isonye na ọrụ akara ụkwụ a-ọrụ mara mma nke ga-enyere ndị niile na-ewepụ obere nkụda mmụọ na-akwado oge nke ịbịaru nso, na otu nka nke na-aga n'ihu na-enye.
21. Dinosaurs na egwurugwu Jelly Messy Play
Yep, nke a bụ aka na-arụ ọrụ ma ọ ga-eme ka obere gị nwee nnukwu obi ụtọ. Canmụaka nwere ike inyere aka na nhazi ahụ, nke mejupụtara na ịcha agba Jell-O , na obi ụtọ mgbe ha na-eduzi dinosaurs na romp gafee squelchy, egwurugwu. Bugharịa ihe ọchị ahụ n'èzí ma ị gaghị agba ọsụsọ ọgba aghara ahụ.
22. Nnukwu Egwurugwu Collage
Ofmụaka nke afọ niile ga-eji obi ụtọ na-achọ maka ihe ha ga-eji maka mgbasa ozi a agwakọta, ụdị ọrụ Montessori. Echiche gị nke kiddo ga-agabiga na agba na-efe efe na egwurugwu-themed ọrụ nka ga-abụ ihe akaebe.
nke mkpụrụ osisi nwere protein karịa
23. Egwurugwu na ite ọla edo
N'ụzọ doro anya, nke a bụ shoo-in maka ụbọchị St. Patty ... ma anyị chere na ọ bụ ọrụ darn mara mma maka oge ọ bụla. Ihe ndi di mkpa-kaadiboodu, nka agba , ọkpọkọ cleaners , tube akwụkwọ mposi, Styrofoam — adịghị ọnụ ala ma dịkwa mfe ịnweta. Nke kachasị, ị nwere ike ịnwe nwatakịrị aka na usoro ọ bụla nke usoro ahụ (na ngwaahịa gwụchara ga-abụ ihe kwesiri ngosipụta).
Obi istọ bụ Ime N'ụlọ
24. Art gbazee Crayon egwurugwu Art
N'ebe a, ihe osise ihe osise a na-agbaze agbaze agbaze nke nwa gị nwere ike ijikwa. (Ntuziaka: Ọ bụ draya ntutu na-agbaze wax.) Ọrụ a dị mfe juputara na ihe ọhụụ, na nsonaazụ ya-ọfụma egwurugwu a na-ahụkarị - mara mma ile anya, nwa gị agaghị achọ iji naanị agba ya klọs ọzọ.
25. Egwurugwu gbamgbam Can Windsocks
Mbadamba ụrọ a nwere ike ifufe na-ebugharị-na usoro a, nke na-agụnye ihe ọ bụla karịa ịse ihe na gluing, na-ekwe nkwa ịnabata ụmụaka nke ọgbọ niile. (Pro ndụmọdụ: Lekọta ndị na-eto eto n'ezie, ka oche gị ghara ịkwaa.) Ihe di mfe, enyi nwoke na enyi ya nke na-eweputa mpempe egwurugwu nke egwurugwu na-acha ocha nke oma.
Arty Crafty Cmụaka
26. N'ime Rainbow Akwụkwọ efere Unicorn Puppets
Inye aka nka nwa gi nwere ike igwu egwu mgbe oru a zuru. Akwukwo achicha akwukwo a di nma bu achicha achicha ime, site na ntaneti unicorn efu. Mgbe ụfọdụ eserese na ịchachachacha mma (ezigbo ọrụ nkuzi, ndị enyi), ma ihe ngosi akwụkwọ ahụ na puppet ga-adị njikere maka egwuregwu n'echiche.
27. Akwụkwọ Akwụkwọ Egwurugwu Egwurugwu
Ezigbo nkà ị ga - enweta site na ọrụ nka a nke ụmụaka ji ebipụ ma mado mpempe akwụkwọ na - acha uhie uhie na kaadị kaadi iji mepụta azụ ha. Nke a nwa-enyi na enyi nka, nke sitere n'ike mmụọ nsọ site hụrụ n'anya kpochapụwo akwụkwọ Egwurugwu Azụ , bụkwa ezigbo mgbakwunye maka oge akụkọ.
Clọ nka nka
28. Ogwurugwu Tangle Beads
Ọbụna ụmụaka na-etolite etolite nwere ike isonye na ọrụ dị mfe nke ịchọ ọla-ya bụ n'ihi na ọ nweghị ụzọ na-ezighi ezi iji mepụta akwa bekee ndị a. Ọzọkwa, ụrọ polymer ejiri mee ihe ebe a na-enye ọtụtụ ihe ntụrụndụ na mkpali dị egwu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, baubles ndị a na-atọ ụtọ ịme ka ha kwesịrị iyi.
29. Egwurugwu Akwụkwọ Efere Tambourines
Anyị hụrụ ezigbo akwụkwọ efere ọrụ-karịsịa mgbe ngwaahịa ahụ gwụchara anaghị efu ngwa ngwa na nchịkọta ụmụaka. N'ebe a, a na-enye efere akwụkwọ dị umeala n'obi ihe ngosi dị iche iche, na-acha egwurugwu ma gbanwee ghọọ ngwá egwú a na-eme n'ụlọ nke nwa gị ga-achọ ijide. Ihe osise dị mfe nke nwere nnukwu ụgwọ.
30. Egwurugwu Cotton Ball sere
Kidsmụaka nwere ike ịnwe ikike ịmị mkpụrụ na ijikọ aka anya mgbe ha na-amụ banyere usoro agba ka ha na-ese egwurugwu nke ha. Enweghị pensụl (ma ọ bụ ihe nchacha) ejide? Nsogbu adighi — usoro ogbe eji awu owu ebe a dabara nke oma maka obere aka, na iji ihe eji akwa akwa eji azutu agwa agba bọọlụ bụ ụzọ amamihe dị mfe iji belata ọgbaghara.
Njikọ: 29 Laghachi na Crafts School maka tomụaka ịlụ ọgụ maka ụbọchị mbụ Butterflies
esi ebi ndụ dị mfe
ndụmọdụ mara mma maka ihu na-enwu gbaa
egwuregwu kacha mma maka ụmụ nwanyị leo
ụdị ịkpụ ntutu isi maka ụmụ nwanyị